Top Fomba nandefa hafatra ny Sinoa Vavy
Maro ny olona tsy mahalala ny maha-zava-dehibe ny fandefasana hafatra an-tsoratra mandra-hihaona ireo vehivavy Aziatika. Ho azy ireo mba hampivelatra ny fifandraisana amin’ny ankamaroan’ny Shinoa ny vehivavy, izy mila mianatra ny fahaiza-ny sms. Fandefasana hafatra an-tsoratra dia ny iray amin’ireo fomba mora indrindra ny olona mahazo ny sain’ny vehivavy Shinoa satria izy ireo ka tia ny fitaovana finday ho toy ny vehivavy avy amin’ny firenena hafa. Koa, ny olona afaka ihany koa ny mihaona ireo vehivavy Aziatika, amin’ny alalan’ny haino aman-jery sosialy sy ny hafa ny fampiharana fandefasan-kafatra, tahaka ny WeChat izay tian’ny ankamaroan’ny vehivavy Shinoa. Rehefa mihaona ireo vehivavy Aziatika, indrindra ny vehivavy Shinoa, ny fifandraisana amin’izy ireo dia tena samy hafa raha oharina amin’ny vehivavy avy amin’ny kaontinanta hafa izao tontolo izao noho ny soatoavina ara-kolontsaina.
Ny vahiny Sinoa ny ankizivavy dia mety ho saro-kenatra sy ny hanihany. Na izany aza, dia tsy izany no nitranga satria tsy dia tsara tokoa ny fahaizana mifehy tena ireo ray aman-dreniny mba ho malina sy malemy ny antony. Nisosa ho amin’ny resaka firaisana ara-nofo mety ho mampitony ny tandrefana vehivavy iray raha toa izy dia miahy anao. Ny mifanohitra amin’izany, izany no mahasakana avy mba ho be loatra ny nanafintohina indrindra ny vehivavy Shinoa na dia tia anao.
Smileys manolotra fomba mifandray amin’ny fihetseham-po sy ny fikasany
Tsy tahaka ny tany tandrefana, emojis na ny smileys dia fampiasa matetika amin’ny alalan’ny olona ao Azia. Noho izany, te-hanomboka ny fampiasana ny smileys matetika rehefa mifampiresaka amin’ny Sinoa ny ankizivavy. Na izany aza, dia tokony hahatsiaro ny fampiasana ny smileys ho maneso vazivazy, satria ny ankamaroan’ny Shinoa zazavavy, dia hitondra ity vazivazy ara-bakiteny. Raha ny tokony ho izy, indrindra ny vehivavy monina ao amin’ny Shina aza t miteny anglisy fa raha hitranga mba hihaona olona iray izay ataony, miezaka ny tsy hanaitra azy amin’ny alalan’ny fifandraisana ao ny fiteny afa-tsy ianao no tena mahay mandaha-teny.
Raha tsy izany, dia hisy risika ny hamoizany ny vokatry ny amim-pahadisoana amin’ny fifandraisana
Koa, dia afaka mampiasa fandikan-teny rindrambaiko mba mifandray amin’ny namany izy rehefa tsy mahafehy tsara ny teny anglisy, ary ianao no tsy mahafehy tsara ny teny. Ny fahamarinan-toetra dia ny toetra amam-panahy izay ankasitrahana ao amin’ny fiaraha-monina Shinoa. Raha toa ianao maniry ny volana Sinoa zazavavy, tsy maintsy mampiseho azy ianao fa mety ho olona ny voninahitra. Noho izany, amin’ny maha-hita sy midina eto an-tany-amin’ny famoahana ny fikasany ho azy, hoy izy dia hanomboka mba hankasitraka bebe kokoa ianao. Izany no tena zavatra fa ny ankamaroan’ny Shinoa ankizivavy ny mitandrina ny fifandraisana manan-tsaina izay no antony maro be ny azy ireo hanao izany ny ao amin’ny toerana voalohany. Noho izany, raha toa ka manapa-kevitra ny hiala aminao fa tiany ny fifandraisana mba ho foana ny zava-miafina izany, miezaka ny manaiky izany. Ny hevitra ambony ireo fomba vitsivitsy dia afaka manomboka ny resaka miaraka amin’ny ankizivavy ianao dia liana amin’ny fiarahana. Raha ny fahitàna azy, miaraka amin’ny fampiharana, dia afaka mahazo nahalala ny zava-nitranga ny sms ny vehivavy Sinoa
← Tsara indrindra ny Lahatsary amin'ny chat Uzbekistan - online dating tsy misy fisoratana anarana
Shinoa Mampiaraka Toerana - Daty Shina Tovovavy - China Online Dating Site Nostrand →